Minamato Yakasimba Yezve Mazuva Ezvishamiso | NZIRA DZOKUNAMATA
Chishanu, July 30, 2021
musha Pfungwa dzemunamato Minamato Yakasimba YeZuva Nezvishamiso
Minamato Yakasimba YeZuva Nezvishamiso
Nhasi tichave tiri kubata nemunamato une simba wezvishamiso zvezuva nezuva. Ndiani asingade chishamiso? Chishamiso chiitiko chakaitika patainge tisingatarisiri. Wati wambove mune mamiriro apo vese vaiita kunge vari kushanda kupokana newe? Panguva yaunofunga kuti zvinhu hazvigone kuwana zvirinani, rubatsiro rwakauya kubva kwausingafungire.
Kusangana pakati pechirikadzi yeZarefati nemuporofita Eriya chishamiso. Chirikadzi murombo nemwanakomana wayo vaive voda kuwana chikafu chekupedzisira pakasvika muporofita mumba mavo. Eriya akakumbira kuti chirikadzi yacho itange yagadzira chikafu chayo. Chinhu chimwe chete chatinofanira kunzwisisa nezve zvishamiso kuteerera. Kunyangwe tichinamata zvine simba nechishamiso chezuva nezuva, zvakakoshawo kuti tidzidze kuteerera mirairo yakapihwa. Dai chirikadzi yeZarefati isina kuteerera Eriya, angadai asina kukomborerwa zvakadaro. Akagadzirira Eria chikafu, uye paakafunga kuti zvainge zvapera kwaari, Ishe vakamukomborera zvikuru.
Kune vamwe vedu vatakangoona chishamiso pamwe kamwe kana kaviri muhupenyu hwedu. Mwari vanogara vakagadzirirwa kuita zvishamiso zvavo muhupenyu hwedu zuva rega rega. Chishamiso chezuva nezuva ndechekuti haungatambure kuti zvinhu zviitike haungatambure kuti uwane kubudirira kwakatanhamara. Kunyangwe uko kwakarambwa vamwe, iwe uchafarirwa ipapo. Ichi chishamiso. Chikurukuru ndechekuti, patinopinda mugore idzva, tinenge tichida zvishamiso zvese zvatinowana.
Iyo inoverengeka Covid-19 parizvino iri kuwedzera mune angangoita nyika dzese dzepasi. Nyika zhinji dzave kutofunga zvekukiya kechipiri kukiya sezvo vachitarisira kuti wechipiri hutachiona hunorova kupfuura hwayo hwekutanga. Tinoda chishamiso chaMwari kuti tirarame hupenyu hwomutambarakede mugore ra2021. Ndinoraira nesimba rematenga; Mwari vanozogara vachikupa zvaunoda muzita raJesu. Munzvimbo yega yega yehupenyu hwako yaunoda chishamiso, simba raMwari Wemasimbaose ngarikushamise iwe muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokutendai nechipo cheupenyu, ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndione rimwe zuva rakanaka ramakaita, Tenzi zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Baba Tenzi, nezvose zvakaipa zviri kuitika, kubuda kwehutachiona, kuparara kwezvehupfumi, baba, ndinonamata kuti nyasha dzenyu dzinditsigire muzita raJesu.
Ishe Jesu, munzira dzose idzo hupenyu hwangu hunokodzera chishamiso, baba, ndinonamata kuti muite zvishamiso zvenyu muzita raJesu. Munzvimbo dzese dzandarambwa, Ishe nyasha dzinofanira kupembererwa, ngadziwire pamusoro pangu muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti mutarise pasi kubva kudenga netsitsi, uye muchapodza zvirwere zvangu zvese muzita raJesu. Ndinonamata kuti simba renyu nenyasha zvibate nzvimbo dzese dzehupenyu hwangu dzinoda kubatwa muzita raJesu.
Ishe Jesu, makatakura urwere hwedu pamuchinjikwa. Ndinonamata kuti muchapodza hurema hwangu hwese nemuzita raJesu. Tenzi, mhando dzose dzehosha kana hurwere zvinotorwa nemuzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamatira Jobho waMwari. Rugwaro runoti Mwari wangu achazadzisa zvese zvandinoda maererano nehupfumi hwake mukubwinya kuburikidza naKristu Jesu. Ndinotaura tsamba yangu yebasa mukuratidzwa muzita raJesu. Mumasangano ese andarambwa, nyasha dzinozondizivisa nekugona ngadziuye pamusoro pangu muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti munzira dzese dzandinoda nhungamiro uye nhungamiro yehupenyu hwangu, ndinonamata kuti mundipe kwandiri muzita raJesu. Ini ndinoramba kumhanyisa hupenyu hwangu zvichienderana neruzivo rwevanhu; Ini ndinoramba kumhanyisa hupenyu hwangu hwakavakirwa pakuyedza uye kukanganisa; Ndinonamata kuti undipe mweya wako unondidzidzisa nekundisimbisa, ngazviuye pandiri nemuzita raJesu.
Ishe Jesu, rugwaro runoti Pakubuda kwaIsraeri Egipita, iyo imba yaJakobho ichibva kuvanhu vemitauro isingazikamwi; Judha yakanga iri nzvimbo yake tsvene, Nalsiraeri ushe hwake. Gungwa rakazviona, rikatiza; Joridhani rwakadzokera shure. Makomo akapembera samakondobwe, Nezvikomo samakwayana. Ndinoraira nesimba reWekumusoro-soro, dambudziko rese riri munzira yangu ngaritize muzita raJesu. Moto weMweya Mutsvene unoparadza zvidziviso zvese zvakamira pandiri.
Tenzi, ndinonamatira kuti imba ibudirire. Vana vangu vakaropafadzwa muzita raJesu. Ndinotema munzira dzese kuti ndanga ndichitarisa kumusoro kuna Mwari kuti vaite chishamiso maererano newanano yangu; Mwari zvigadzirise izvozvi muzita raJesu.
Ishe Jesu, munzira dzese dzandinotarisira kwamuri maropafadzo, baba, ndinonamata kuti mundiropafadze zvakanyanya muzita raJesu. Ndinoraira kuvhura denga rekuropafadza. Ndinoraira kuti maropafadzo ako awire pandiri muzita raJesu.
Baba Tenzi, munzira dzose dzinoda hupenyu hwangu, Ishe ndinzwirei zita muzita raJesu. Pandinotarisa kumabvazuva, ndiwane nyasha. Kana ndatarisana nekumadokero, dai maropafadzo enyu anditevere kana ndaenda kuNorth, nyasha dzenyu ngadzive neni muzita raJesu.
Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, "Ndichanzwira tsitsi wandichanzwira tsitsi uye nekunzwira tsitsi wandinozova naye." Baba Tenzi, ndinonamata kuti pakati peavo vane tsitsi dzenyu Tenzi ndiverengei ndakakodzera muzita raJesu.
Ishe Jesu, munzira dzose idzo hupenyu hwangu hunoda chishamiso chako, kunyangwe zvine chekuita neutano hwangu, muchato, basa, kana dzidzo, Ishe, ndinonamata kuti muite zvishamiso zvenyu muzita raJesu. Mwari, muri Mwari anoita zvishamiso. Ndinonamata kuti chishamiso cheawa regumi nerimwe chiitike muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, mazuva ese ehupenyu hwangu, maoko enyu ngaave pandiri muzita raJesu.
minana minamato ine simba minana
Previous nyayaYakasimba Zviziviso zve2021
inoteveraKunamatira Kubudirira Kwebhizinesi Muna 2021
Emmanuel Dickson Zvita 29, 2020 At 10:51 pm
Ndinokutendai neminamato iyi.
Sottie Evans Ndira 5, 2021 At 7:12 am
Anoshamisa munongedzo wemunamato
Okpala tariro Ndira 9, 2021 At 9:29 am
Ndinokutendai zvikuru neminamato iyi
Chinanazi Ndira 12, 2021 At 4:40 am
Amen 🙏 muzita raJesu tinoti ndokuraira nekutemaTaura nekupa rumbidzo nembiri baba pindurai minamato yedu muna Jesu izita rine simba uye rakakosha zita ratabata tambirai mugamuchire amen hallelujah Amen rumbidzai Jehovha
Fukah Gibson Ndira 13, 2021 At 4:48 am
Ndinokutendai neaya anoshamisa minyengetero mapoinzi Mwari varambe vachiwedzera imi changamire
Boby Mathew Kukadzi 1, 2021 At 3:03 am
Ndinokutendai neminamato ine simba
Zvikonzero zvishanu Unofanirwa Kushingairira Kuziva Mwari Zvirinani
5 Zvikonzero VaKristu Vese Vanofanirwa Kuparidza Evhangeri
Kunamata Points Kufamba Murudo
Minamato Yekunatsa Aritari
Munamato wekubatsirwa nemari uye kugadzikana
Minamato Yekununurwa Kubva Kunesimba